HomeWararka MaantaBarcelona Fursad Taariikhi Ah Ayay Haysataa Kulanka Atletico – Xavi
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Barcelona ee Xavi ayaa sheegay in kooxdiisa ay la gudboon tahay inay ka faa’iidaysato ‘Fursada Taariikhiga ah’ si ay Horyaalka La Ligaha u hantiyaan maalinta Sabtida ah.
Kooxda Catalanka ayaa u muuqatay mid ka quusatay horyaalka kadib markii ay barbaro 2-2 ah la galleen Getafe horaantii bishan , laakiin guuldaradii Levente iyo barbarihii Malaga ayaa ka dhigay Atletico mid bannaysa fursadii ay ku qaadi lahayd La Liga.
Ciyaaryahanada Gerardo Martino ayaa guul ay ku gaadhaan Camp Nou oo kaliya ku qaadi kara horyaalka , halka Atletico ay u baahan tahay barbardhac si ay u qaado horyaalkii ugu horeeyey tan iyo 1996 kii.
Xavi oo aaminsan in fursadoodu laalnayd todobaad ka hor , oo hadda soo noolaatay, looga baahan yahay inay ciyaar naf hurnimo ah ku soo bandhigaan taageerayaasha Barcelona hortooda.
“Waxaanu u haysanay inaanu ka hadhay horyaalka, laakiin kubada cagta ayaa markale Fursad na siisay.” Ayuu yidhi Xavi.
“Garoonkayaga ayaanu ku ciyaari doonaa iyo taageerayaashayada hortooda, waxaanan haysanaa wax kasta oo noo suurto gallin lahaa inaanu guusha helno.”
“Fursad taariikhi ah baanu haysanaa, waxay noqon doontaa ciyaar amakaag reebta, qof kasta oo aaminsan inaanu anagu gacanta sare leenahayna, wuxuu u dabaal deggi doonaa si waali ah.”
“Waxaanu dhamaantayo u baahanahay ayaa ah guusha horyaalka. Ciyaartani waa mid khaas ah mana garanayo inay xaaladan oo kale mar dambe na soo mari doonto.”
A.Madrid 0-0 Chelsea : Sawiradii Ugu Fiicnaa Ciyaarta
Rihanna Oo Iibsanaysa Kooxda Liverpool & Drogba Oo Arintan Ka Shaqeeyey